အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော > အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော
APL-210N အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော များမှာ ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ လေးပုံတပုံ အလှည့် အခင်အရှင် လျှောက်လွှာများ နှင့် ခဲ့ ကျယ်ပြန့် အသုံးပြုခံ့ တွင် များသော တွင်dustries. APL-210N အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော ပေး တိကျမှု နှင့် စိတ်ချရသော အခင်အရှင် အနေအထား signalတွင်g နှင့် တွင်dicatတွင်g ၏ အများဆုံး အခင်အရှင်s သို့မဟုတ် actuatသို့မဟုတ်s ထုတ်လုပ်သော။
OMRON: စက်မှု switch သည် ပွောငျးလဲ
APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာများအတွက် 1. လျင်မြန်စွာ cam စက်,
tools တွေမပါဘဲ cam အပေါ်စမ်း fix ။
3. APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကို box ကို switch ကိုအနေအထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်ပြချက်များကဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်
စက်မှု switch ကို (2SPDT) APL-210N အဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာ
IP67, IP68 စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်တယ်
1. ကျနော်တို့တင်းကြပ်စွာအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကို box ရဲ့ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရန်ကမ္ဘာ့အဆင့်မီအပြောင်းအလဲနဲ့နည်းပညာနှင့်မြင့်မားသောတိကျအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည်စံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာစက်ရုံမထွက်ခွာမီထုတ်ကုန်စမ်းသပ်ခြင်းကိုခံယူပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့3နှစ်နီးပါးမျှဖောက်သည်တိုင်ကြားမှုများရှိသည်။
မေး: ငါတို့သည်သင်တို့၏အဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာသို့မဟုတ်အထုပ်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ခံရဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုဂိုသို့မဟုတ် comany နာမကိုအမှီရနိုင်မလား?
မေး: အဆို့ရှင်အနေအထားညွှန်ပြချက်ရေစိုခံန့်သတ်ချက် switch ကိုသေတ္တာမှာဘယ်လိုနေသလဲ?
1) Product information Quantity, Specfcaton(Size, ပစ္စည်း,Technological if needed and Packing requirements etc)
hot Tags:: အခင်အရှင် အနေအထား ညွှန်ပြချက် ရေစိုခံ ကန့်သတ် ပွောငျးလဲ သတျတော, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်